ထိုကာလအခါ သူတို့သည် အစာရှောင်ကြလိမ့်မည် နိူးထမှုနှင့်ပါတ်သက်၍ တရားဒေသနာ ၄| Then Shall They Fast | Real Conversion
ထိုကာလအခါ သူတို့သည် အစာရှောင်ကြလိမ့်မည်
(နိူးထမှုနှင့်ပါတ်သက်၍ တရားဒေသနာ ၄)
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ် ( ၁၀ ) ရက်၊ သခင်ဘုရား၏နေ့ရက်ညနေပိုင်းတွင် လောဒ့်
အိမ်ဂျယ်လ်ရှိ Baptist Tabernacle အသင်းတော်တွင်ဟောကြားခဲ့သော
Dr. R. L. Hymers, Jr. ၏တရားဒေသနာဖြစ်သည်။
“မင်္ဂလာဆောင်လုလင်ကို သူ၏အပေါင်းအဘော်တို့နှင့်ခွါ၍ ယူသွားသောအချိန်ကာလ ရောက်လိမ့်မည်။ ထိုကာလအခါသူတို့သည် အစာရှောင်ကြလိမ့်မည်။” (လုကာ ၅း ၃၅ )
ယေရှုသည်မဿဲအား တပည့်တော်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် မဿဲသည် မိမိအိမ်၌ ပွဲကြီးပွဲကောင်းကျင်းပခဲ့သည်။ “အခွန်ခံသောသူများနှင့်ဆိုးသောသူများ တို့သည် လာ၍ ကိုယ်တော်မှစသော တပည့်တော်တို့နှင့်တကွ စားပွဲ၌လျောင်းကြ၏။” (မဿဲ ၉း ၁၀) ထိုအချင်းအရာကို ဖာရိရှိတို့မြင်ကြသောအခါ ယေရှုသည် ထိုသို့ဆိုးသောသူများနှင့်အဘယ့် ကြောင့်စားသောက်လျက်ရှိသနည်းဟု မေးမြန်းကြသည်။ ယေရှုကမိန့်တော်မူသည်မှာ “ဖြောင့် မတ်သောသူတို့ကို နောင်တသို့ခေါ်ခြင်းငှါ၊ ငါလာသည်မဟုတ်။ ဆိုးသောသူတို့ကိုခေါ်ခြင်းငှါ၊ ငါ လာသတည်းဟု မိန့်တော်မူ၏” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ (မဿဲ ၉း ၁၃ ) သူက မိမိကိုယ်ကို ဖြောင့်မတ် သည်ဟု ထင်မှတ်နေသောသူများကို ခေါ်ခြင်းငှါလာသည်မဟုတ်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲ မိမိကိုယ်
ကို အပြစ်သားဖြစ်သည်ဟုထင်မှတ်သောသူများကို ကယ်တင်ခြင်းငှါသာလာသည် ဟုဆိုလို သည်။ ဗတ္တဇံဆရာယောဟန်၏တပည့်တော်များသည် ပွဲတော်သို့လာ၍မေးမြန်းခြင်းကိုပြုခဲ့ကြ သည်။ သူတို့က ၎င်းတို့နှင့်ဖာရိရှိများသည် အစာရှောင်ကြပြီး ယေရှု၏တပည့်တော်များ အစာရှောင်ခြင်းမရှိကြသည့်အကြောင်းကို မေးမြန်းခဲ့ကြသည်။ ယေရှုက ဤသို့ဆိုထားပါသည်။
“မင်္ဂလာဆောင်လုလင်သည် မိမိအပေါင်းအဘော်တို့နှင့်အတူရှိစဉ်အခါ သူတို့ကို အစာရှောင်စေနိူင်သလော၊ မင်္ဂလာဆောင်လုလင်ကို သူတို့အပေါင်းအဘော်တို့နှင့်ခွါ ၍ယူသွားသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်။ ထိုကာလအခါသူတို့သည် အစာရှောင် ကြလိမ့်မည်။” ( လုကာ ၅း ၃၄-၃၅ )
ယေရှုက သူသည် တပည့်တော်တို့နှင့်အတူရှိလျက်နေသေးသည်ဖြစ်၍ သူတို့အစာ ရှောင်ရန်မှာ ဖြစ်နိူင်ခြေမရှိကြောင်းဆိုသည်။ ယေရှုက မိမိကိုယ်ကို “မင်္ဂလာဆောင်လုလင်” အဖြစ်တင်စားပြီး ပွဲတော်ကို ဂျူးတို့၏မင်္ဂလာဆောင်ပွဲနှင့်ခိုင်းနှိုင်းထားသည်။ သို့သော် ယေရှုက မိမိသည် မကြာမီ “ခွါ၍ယူသွားခြင်းခံရမည်” အကြောင်းဆိုခဲ့သည်။ (လုကာ ၅း ၃၅ ) သူသည် ကောင်းကင်သို့ဆောင်ယူခံရပြီးချိန်တွင် သူတို့အစာရှောင်ဆုတောင်းကြမည်အကြောင်းဆိုလိုသ တည်း။
“မင်္ဂလာဆောင်လုလင်ကို သူတို့အပေါင်းအဘော်တို့နှင့်ခွါ ၍ယူသွားသောအချိန်ကာ လရောက်လိမ့်မည်။ ထိုကာလအခါသူတို့သည် အစာရှောင် ကြလိမ့်မည်။” ( လုကာ ၅း ၃၄-၃၅ )
ယခုတွင် အကျွန်ုပ်တို့သည် သင်တို့အား ခရစ်တော်၏နှုတ်ထွက်စကားကို အာရုံပြုစေလို သည်။
“ထိုကာလအခါသူတို့သည် အစာရှောင် ကြလိမ့်မည်။”( လုကာ ၅း ၃၄-၃၅ )
Dr. John R. Rice က ဤသို့ဆိုထားသည်။
ယေရှုသည် ခွါ၍ဆောင်ခြင်းကိုခံပြီးနောက်တွင် သူတို့၏ ဒုက္ခခံရသောအချိန်၊ ဝိညာဉ် တန်ခိုးအတွက်စောင့်နေသောအချိန်၊ သူတို့အပေါ်ညှင်းပန်နှိပ်စက်မှုခံရသောအချိန် ရောက်လာမည်ဖြစ်၍ သူတို့သည် အစာရှောင်ကြလိမ့်မည်။ [“ထိုကာလအခါသူတို့ သည်အစာရှောင် ကြလိမ့်မည်” ဟူသောစကားလုံး] သည် ခရစ်တော်ကောင်းကင်သို့ တက်ကြွတော်မူပြီး ပင်္တေကုတ္ထ်တေ့နေ့မတိုင်မှီ ဒဏ်ပေးရသောအချိန်ကာလတွင် တပည့်တော်များ အစာရှောင်ကြမည်အကြောင်းကို ညွန်းဆိုထားသည်။ ( တမန် ၁း ၁၂-၁၄ ) ရှင်ပေါလုသည်လည်း ထိုကဲ့သို့အစာရှောင်ပြီး ဝိညာဉ်တန်ခိုးအတွက် ဆုတောင်းခဲ့သည်။ (တမန် ၉း ၉၊ ၁၁၊ ၁၇ ) နောက်ပိုင်းတွင် ဗာနဗ၊ ပေါလု၊ နှင့် အခြားတရားဟောဆရာများနှင့် ဓမ္မဆရာများသည် ဘုရားသခင်ကို ဆုတောင်းစောင့် မျှော်ကြရင်း အစာရှောင်ခဲ့ကြသည်။ တမန်တော် ၁၃း ၁-၃ ( John R. Rice, King of the Jews, ဝိညာဉ်ဓါးပုံနှိပ်တိုက်၊ ၁၉၈၀၊ စာ- ၁၄၄ )
သမ္မာကျမ်းစာက မှားယွင်းသောအစာရှောင်ခြင်းကို မြစ်တားခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ရိုးသား သောအစာရှောင်ဆုတောင်ခြင်းကိုမူ မြစ်တားခြင်းမရှိပါ။ ယေရှုခရစ်ကိုယ်တော်တိုင်သည် အမှုတော်လုပ်ငန်းစတင်သောအချိန်တွင် တောထွက်၍ အစာရှောင်ဆုတောင်းခဲ့ကြောင်း သမ္မာ ကျမ်းစာက ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။( မဿဲ ၄း ၁၊ ၂ ) စနုတ်တိတ်ခရစ်ဝင်ကျမ်း သုံးခုစလုံဖြစ်ကြသည့် မဿဲ၊ မာကု၊ နှင့် လုကာ တို့သည် ခရစ်တော်၏စကားများကို ကျွန်ုပ်တို့ အဖို့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြသည်။ “ထိုကာလအခါသူတို့သည် အစာရှောင်ကြလိမ့်မည်။” ကျွန်ုပ်တို့သည် “ထိုကာလ”ထဲတွင် အသက်ရှင်နေကြသည်။ အကြောင်းမှာ ၎င်းသည် မျက်မှောက်ကာလခေတ်ကာလပိုင်းခြားခြင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်နေထိုင်ရာ”ထိုနေ့ရက်”ကို ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ခရစ်တော်က ညွှန်ကြားထားပါသည်။ Dr. J. Vernon McGee က ဤသို့ဆို ထားပေသည်။ “ ယနေ့ကာလအစာရှောင်ခြင်းတွင် စစ်မှန်သောတန်ဖိုးများရှိပေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်တွင် မိမိကိုယ်ကိုဝပ်စင်းကြောင်းယူဆချက်ဖြင့် အစာ ရှောင်ခြင်းအမှုကိုပြုသင့်သည်။ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏သနားခြင်းနှင့် အကူအညီကို လိုအပ်သောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။” ( J. Vermon McGee, Th. D., Thru the Bible, Thomas Nelson ပုံနှိပ်တိုက်၊ အတွဲ ၆၊ စာ- ၅၃၊ မဿဲနှင့်ပါတ်သက်၍မှတ်စု)
Spurgeon ကလည်း “ဆုတောင်းခြင်းနှင့် အစာရှောင်ခြင်းတို့တွင်ကြီးမားသည့်တန်ခိုး”ရှိ သည်ဟုဆိုထားသည်။ (“ကျဆုံးခြင်း၏လျှို့ဝှက်ချက်” ) ၎င်းသည် မှန်ကန်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ယုံ ကြည်မိသည်။ ပထမနိူးထမှုတွင် လူတိုသည် ဆုတောင်းခြင်ကိုသာအဓိကအာရုံထားကြသော ကြောင့် အစာစားရန်ပင်မေ့လျော့နေကြကြောင်းတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ သုံးနှစ်သာကာလအတွင်း ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတို့သည် ပြောင်းလဲလာကြသည်။ တတိယအကြိမ်နိူးထမှုကြီးတွင် အသင်းတော်သင်းအုပ်သည် လာမည့်တနင်္ဂနွေနေ့အစီအစဉ်တွင် နိူးထမှုရှိစေရန်အတွက် အစာရှောင်ဆုတောင်ရန်တိုက်တွန်းသည်ကို ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ထိုညတွင်လူပေါင်း၅၀၀ လောက်ပြောင်းလဲလာကြပြီး သုံးလတာမျှကြာညောင်းခဲ့ပေသည်။ Spurgeon က “ ဆုတောင်း ခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းတို့တွင် တန်ခိုးရှိသည်” ဟုဆိုသောအခါတွင် မှန်ကန်ကြောင်း ကိုယ်တွေ့ သိခဲ့ရပေသည်။ သို့ရာတွင် Dr. Martyn Lloyd-Jones က “အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သောအရာများသည် ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာများနှင့် ခရစ်ယာန်အတွေးအခေါ်တစ်ခုလုံး ထဲမှလွင့်ကျကွယ်ပျောက်သွားသည်” ဟုဆိုထားပေသည်။ ( Studies in the Sermon on the Mount, Eerdmans, ၁၉၈၇၊ စာ-၃၉ ) Dr. John R. Rice ကလည်း “ အစာရှောင်ခြင်းသည် ထိုသို့ဆုံးရှုံးသောအရာဖြစ်သည်၊ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုမရှိလျှင်၊ သွန်သင်စရာမရှိ။ သို့သော ကြောင့် အစာရှောင်ခြင်း၏အနှစ်သာရကို လေ့လာဆင်ခြင်ရန်လိုအပ်ပေသည်” ဟုဆိုထားပါ သည်။ ( John R. Rice., D. D., ဆုတောင်းခြင်း-တောင်းဆိုခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်း၊ ဝိညာဉ်ဓါးပုံနှိပ် တိုက်၊ ၁၉၇၀၊ စာ- ၂၁၆ ) ဆက်လက်၍ ဆုတောင်းခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး Dr. Rice ၏ ယူဆချက် ကိုလေ့လာကြပါစို့။
၁။ အစာရှောင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်းကိုဦးထိပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ လော က၌ရှိသမျှသောအရာကိုကျောခိုင်းပြီး ဘုရားသခင်၏မျက်မှာတော်ကိုဖူး တွေ့မည့်အချိန်လည်းရှိသည်။ ထိုသို့သောအချိန်သည် အစာရှောင်ခြင်း နှင့်ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်သင့်သည်။
၂။ အစာရှောင်ခြင်းဟူသည်မှာ မိမိကိုယ်ကိုဘုရာသခင်၌ပုံအပ်ဆုတောင်းပြီး ဘုရားသခင်ကိုစောင့်မျှော်ခြင်းဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်အစာရှောင်ခြင်းသည် ဘုရာသခင်၌အမှန်တကယ်ပုံအပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး တစ်ဦးက အစာကိုလိုလား လားသည်ထက် ဘုရားသခင်ကိုအလိုရှိခြင်းဖြစ်သည်။
၃။ အစာရှောင်ခြင်းသည် ဆုတောင်းခြင်းတွင် သည်းခံခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည်ဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုမပြုဘဲနေသည်တွင် မိမိကိုယ်ကိုအပြစ်ပေ ရာရောက်ပေသည်။ အစာရှောင်ခြင်းသည် ပြင်းထန်သောဆုတောင်းခြင်း နှင့် သည်းခံခြင်းပါရှိသင့်သည်။
၄။ အစာရှောင်ခြင်းက ဘုရားသခင်သည် အဖြေပေးတော်မူမည်အကြောင်း လူတစ်ဦး၏ရိုးသားမှုနှင့်စိတ်ချမှုကိုပြသည်။ ဆုတောင်းခြင်းသည် အရိပ် နှင့်မရိုးသားမှုကို တစ်ခါတစ်ရံဖြစ်စေပါသည်။ ဆုတောင်းခြင်းမှာစွာအဖြေ မရသောအကြောင်းတရားတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ အစာရှောင်ခြင်းက ကျွန်ုပ် တို့သည် ဆုတောင်းခြင်းကိုအဖြေပေးရန်ဘုရားသခင်ကို အလေးအနက် ပြုကြကြောင်းထင်ရှားစေသည်။ (ထပ်၍၊ စာ- ၂၁၈-၂၂၀ )
ထိုအပြင် Dr. Rice က အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်ထံရရှိ န်ိူင်သောအရာများကို စာရင်းပြုစုထားသည်။
၁။ အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့် ဒုက္ခရောက်သည့်အခါအကူ အညီကိုရရှိသည်။ ဒုက္ခရောက်သည့်အချိန်သည်ဆုတောင်းရန်အကောင်း ဆုံးအချိန်ပင်ဖြစ်သည်။ အခြေအနေသည် အမှန်ပင်ဆိုးရွားနေလျှင်၊ ၎င်း အစာရှောင်ရန်နှင့်ဆုတောင်းရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပေသည်။
၂။ အဘယ်အရာမှားယွင်းနေသည်၊ ဘုရားသခင်ကို မပျော်ရွင်စေသောအရာ သည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို တွေ့ရှိရန် တစ်ခါတစ်ရံဆုတောင်းသင့် သည်။
၃။ အစာရှောင်ခြင်းနှင့် ဆုတောင်္္္္္္္္းခြင်းသည် အပြစ်ကိုအောင်မြင်ခြင်းဆီသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ပထမနိူးထမှု၌လူငယ်များသည် ဘုရားသခင်၏အ လိုတော်ကိုလိုက်ရှာပြီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အပြစ်ဝန်ခံကြသည် ကို ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ဖြစ်တတ်ပေသည်။ အပြစ်အပေါ်တွင် အောင်မြင်မှုကြီးကျရောက်လာပေသည်။ ၎င်းမှာ သူတို့၏ဆုတောင်းခြင်း နှင့်အစာရှောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
၄။ အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ဆုတောင်းခြင်းသည် အခြားသူများအပေါ်ဆုတောင်း ပေးခြင်းကိုပြုသည်။ အခြားသူများပြောင်းလဲရန်ဆုတောင်းပေးလျှင် တစ် ချိန်တွင် တစ်ဦးအတွင်သာဆုတောင်းပါ။ ယေဘုယျသဘောအားဖြင့်ဆု မတောင်းပါနှင့်။ “ အို၊ ဘုရားသခင် တစ်ဦးဦးကို ကယ်မတော်မူပါ။” ထို့ အပြင် ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်အတွက် နာမည်နှင့်ဆုတောင်းပေးပါ။ တစ်ဦးဦး အတွက် ဆုတောင်းပေးလိုပါသလား။ ထိုသူအတွက ဘုရားသခင်ထံမှအ ဖြေရသည်အထိ အစာရှောင်ဆုတောင်းပါ။ ထိုအရာကို သီချင်းဟောင်း တစ်ပိုဒ်က ဤသို့ဆိုထားပေသည်။
(Rev. William C. Poole သီကုံးသည့်“ထိုအရာ အားဖြင့်ဆုတောင်းပါသလော” ၊ ၁၈၇၅-၁၉၄၉၊ သင်းအုပ်ဆရာ ကပြုပြင်ပေးသည်။)
၁၉၆၀ အစောပိုင်းကာလဖြစ်သည့် ကျွန်ုပ်ပထမဆုံးပြောင်းလဲသည့်အချိန်တွင် ဂျွန်ဝယ်စ လီ၏ သတင်းဂျာနယ်ကို နေ့တိုင်းလိုလိုဖတ်ရှုခဲ့ရသည်။ ယင်းမှာ တမန်တော်ဝတ္ထုကို ဖတ်ရှုရသ ကဲ့သို့ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသတင်းဂျာနယ်သည် “ပထမဆုံးနိူးထမှု” တည်းဟူသော နိူးထမှုအ ကြောင်းကိုပြောပြသည်။ ထိုကာလသည် အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် ယောင်္ကျားလေးဘဝသာဖြစ် သည်။ ထိုသို့သောနိူးထမှုကြီးသည် နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်အတွင်းရှိခဲ့သည့်အကြောင်းကျွန်ုပ်မ သိရှိပေ။ မစ္စတာဝယ်စလီလက်ထက်တွင် ထိုသို့သောနိူးထမှုဖြစ်ခဲ့ပါလျှင် ယနေ့တွင်လည်းဖြစ် နိူင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်တော်အသင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့ရာ တရုတ်အသင်းတော်တွင် နိူးထမှု ကိုစေလွှတ်နိူင်သည်ကို ကျွန်ုပ်၏မသိရှိခြင်းက သံသယကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ နိူးထမှုကို စေလွှတ်ရန် ဘုရားသခင်အားအစာရှောင်ဆုတောင်းခဲ့သည်။ အသင်းသူ/သားများအတူတကွ ဆုတောင်းခြင်းမတိုင်မှီ ဗုဒ္ဓဟူးညတိုင်းတွင် နိူးထမှုအတွက် ဆုတောင်းပဌနာပြုကြသည်။ တစ်ခု သောအချိန်တွင် Murphy Lum က အစားအသောက်အပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးသွန်းလောင်း ချပေးရန်အတွက်ဆုတောင်းရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်လည်း နိူးထမှုရှိရန်အတွက် ၁၀ မိနစ်ခန့်ဆုတောင်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် အစားအသောက်အတွက်ဆုတောင်းရန်သတိမရဘဲ ပြန်ထိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် အချိန်တိုင်းနိူးထမှုအတွက်ဆုတောင်းလျက် မိမိအထဲတွင်စိတ်ငြို ငြင်စရာဖြစ်စေရမည်။ လူအချို့တို့က “ကောင်းပြီ၊ သူသည်ယောင်္ကျားလေးသာဖြစ်သည်၊ ၎င်းကို လွန်မြောက်လိမ့်မည်” ဟုဆိုကြသည်။ သို့ရာတွင် အသင်းတော်ဝန်းထဲ၌ ကျွန်ုပ်အိပ်လျက်ရှိနေ စဉ်ခါတွင် ဘုရားသခင်ကအဖြေပေးတော်မူခဲ့သည်။ ရာပေါင်းများစွာသောတရုတ်လူငယ်များ သည် အသင်းတော်သို့ရောက်လာကြပြီး ကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းအားဖြင့် ထိုအသင်းတော်ကို လှုပ်နိုးခဲ့သောထိုနိူးထမှုကြီးကို ကျွန်ုပ်လုံး၀မေ့မည်မဟုတ်ပါ။
နှစ်ပေါင်းများစွာကျော်လွန်လာသောအခါ ကျွန်ုပ်သည်မည်သို့ဆုတောင်းခဲ့သည်ကို သတိမရတော့ပေ။ သို့သော် တနေ့တွင် Dr. Lum က “Bob, လွန်ခဲ့သည့် ၁၉၆ဝခုနှစ်က နိူးထမှု အတွက်မည်သို့ဆုတောင်းခဲ့သနည်း” ဟုမေးခဲ့သည်။ ထိုမှသာ ကျွန်ုပ်သတိရခဲ့သည်။ Dr. Lum က “ဘောက်စ်ရယ် သင်ဆုတောင်တာကိုရလိုက်တာပါပဲ” ဟုပြောလိုက်သည်။ သတိရလာသော အခါ ကျွန်ုပ်ပါးပြင်တွင် မျက်ရည်များစီးကျလာခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်သောအရာ မှာ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကိုသွန်းလောင်းရန်ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်။
အခြားချိန်တွင် သင်တန်းတွင်ရှိသောလူငယ်များသည် ကျွန်ုပ်၏အခန်းထဲတွင် မယုံကြည်သေးသောသူများပြောင်းလဲလာကြရန် သို့မဟုတ် စာချသောသူများကို ဘုရားသခင်က ဖယ်ရှားပေးရန်ဆုတောင်းကြသည်။ ထိုသို့ဖြစ်လာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့အချို့ကဆုတောင်းကြသည်။ ထိုအစည်းအဝေးနောက်ဆုံးအချိန်တွင် များစွာသောကျောင်းသားများသည် ခန်းမတွင်ရှိကြပြီး ၁၀၀ ကျော်မှာ ကျွန်ုပ်အခန်းထဲတွင် ပြည့်ကျပ်နေသည်သာမက အချို့မှာ ပြတင်းပေါက်အပြင် ဘက်တွင်ရှိနေကြသည်။ နှစ်ပေါင်း ၃၅ နှစ်ကျော်လွန်ခဲ့ပါပြီ။ မည်ကဲ့သို့အစာရှောင်ဆုတောင်းခဲ့ ကြသည်ကို ကျွန်ုပ်မေ့ခဲ့ပြီ။ ထို့နောက် တစ်နေ့တွင် လီဗရယ်စာချဆရာတပါးသည်ထွက်ခွါသွား ပြီး အသစ်ရောက်လာသူများက နှုတ်ကပါတ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံကြပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု များရှိလာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်အခန်းထဲရောက်လာသောသူငယ်တစ်စုက ထိုအရာများကို ဆုတောင်း ခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် အထက်ပါကျွန်ုပ်တို့၏ဆုတောင်းချက်များကို ဆုတောင်းခဲ့ပြီး ကျွန်ုပ်တို့မမျှော်လင့်သောအတိုင်းအတာဖြင့်အဖြေပေးခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်အမျိုးသမီးအတွက် နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်ဆိုင်းရသည်။ အခု ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၄၀ ရှိပါပြီ။ သင်းအုပ်၏အမျိုးသမီးဖြစ်နိူင်မည့်သူတစ်ယောက်မျှ ကျွန်ုပ်မသိပေ။ သို့ဖြစ်သော၍ မိန်းမအတွက် စဉ်ဆက်မပြတ်ဆုတောင်းခဲ့သည်။ အစာရှောင်ပြီးလည်းဆုတောင်းခဲ့သည်။ တနေ့တွင် ငါလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ Ileana ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ “ထိုသူမှာ သင်ဆုတောင်းထား သောသူဖြစ်သည်” ဟု ဘုရားသခင်စကားပြောဟန်ရှိသည်။ “သင်သည် လူငယ်မိန်းကလေးကို လက်မထပ်သင့်ဘူးမဟုတ်လား” ဟု လူတို့ကပြောဆိုကြသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်လက်ထပ်ခဲ့ သည်။ သူသည် သင်းအုပ်မိန်းမအတွက် အရမ်းကို လုံလောက်ပြည့်စုံတဲ့အရည်အချင်းရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဆုတောင်းချက်ကို ဘုရားသခင်နားညောင်းတော်မူခဲ့သည်။
နောက်ထပ်အကြောင်းအရာသုံးခုကို ကျွန်ုပ်ပြောပြလိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်အမေပြောင်းလဲ လာမည်ဟု မည်သူမျှမထင်မှတ်ကြပါ။ ကျွန်ုပ်ပင်လျှင်ထင်မထားပါ။ ကျွန်ုပ်ဆက်လက်ဆုတောင်း ပေးသော်လည်း မျှော်လင့်ချက်လုံးဝမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်ဆက်လက်ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ မိခင်ကြီး ပြောင်းလဲလာဖို့အတွက် အစာရှောင်ပြီးလည်းဆုတောင်းခဲ့သည်။ သူသည် ယခုအချိန်တွင် အသက်ရှိဆယ်တောင်ရှိနေပြီး ပြောင်းလဲလာမည့်အရိပ်အယောင်လည်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်နှင့် Ileana သည် ကျွန်ုပ်အထူးဖိတ်ကြားခြင်းခံရသဖြင့် တရားဟောရာ နယူးယောက်ခ်မြို့တွင်ရှိနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်နေခဲ့သောနေရာကို ကျွန်ုပ်မှတ်မိသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ထိုညအစီအစဉ်အတွက် ဆုတောင်း ပဌနာပြုခဲ့သည်။ တစ်ချက်မှာ ကျွန်ုပ်သည် စတင်ပြီး မိခင်ကြီးပြောင်းလဲဖို့ဆုတောင်းခဲ့သည်။ ရုတ်တရက်ဘုရားသခင်စကားပြောတော်မူခဲ့သည်။ ကြားနိူင်သောအသံမဟုတ်သော်လည်း တစ်ဦးတစ်ယောက်၏အသံပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က “သင့်မိခင်ကြီး ယခုပြောင်းလဲပေလိမ့် မည်” ဟုဆိုလေသည်။ မျက်ရည်များစီးကျလာသည်။ နယူးယောက်ခ်တွင်ရှိသော Dr. Cagan ကို ဖုန်းဆက်ခေါ်လိုက်သည်။ “ဆရာ၊ ငါ့အမေကို ခရစ်တော်ထံဦးဆောင်ပေးနိူင်မလား” လို့မေးခဲ့ သည်။ သူက “ငါမလုပ်နိူင်ဘူး။ အရင်က သူ့ကိုစကားပြောတဲ့အချိန်မှာ ငါ့ကိုအရူလုပ်တယ်”ဟု ဆိုလေသည်။ “ဆရာ၊ သူ့ဆီသွားပြီးဝေငှပါ၊ ဘုရားသခင်က အခုပဲစကားပြောတယ်၊ သူပြောင်း လဲလိမ့်မည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်အမေကို သွားတွေ့ရန်ကားမှောင်းထွက်သွားပြီး သူမကို ခရစ်တော် ထံသို့အလွယ်တကူပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ သူ၏အသက်တာကိုလုံး၀ပြောင်းလဲစေသည်ဟု ကျွန်ုပ် ၏ကလေးများပင်လျှင်ပြောကြလိမ့်မည်။ သူ့ဘဝအသက်တာကုန်ဆုံးသည့်တိုင် သူသည် ကျွန်ုပ် နှင့်အတူညတိုင်း ဝက်ပြုခြင်းတွင်ပါဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်မိခင်ကြီးအတွက်ဆုတောင်းခဲ့သည်။ ဘုရား သခင်၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့် အဖြေရသည်အထိဆုတောင်းခဲ့သည်။
နောက်တစ်ခုရှိသေးသည်။ စကားမစပ် ဤအရာအားလုံးသည် ဆုတောင်းခြင်းနှင့် အစာ ရှောင်ခြင်းအချိန်ကာလသာဖြစ်ပေသည်။ ဆုတောင်းခြင်းသည် အရာအားလုံးထက်ပို၍အရေးပါ သည်မှာ မှန်ပါ၏။ ကျွန်ုပ်ဇနီးသည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည့်အချိန်တွင် ပေါ့ပေါ့တန်တန်အလုပ်လုပ် သည့်ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရှိသည်။ သူသည် နောက်ပိုင်းတွင် သူ၏ဆေးကုသခွင့်လိုင်စင်ကို လည်းဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ကလေးကို ကြည့်ဖို့အတွက် ဓါတ်မှန်ရိုက်ရန်သူ့ဆီကို သွားခဲ့ကြသည်။ ဓါတ်မှန်ပြန်ရသောအခါ ဆရာဝန်က ကျွန်ုပ်တို့ကိုထိုင်ခိုင်းပြီး ကလေးအနေအထားမကောင်းဘူး ဟုဆိုသည်။ သို့သော်သူသည် အခြားပုံကိုကြည့်ပြီး တနင်္လာနေ့တွင်အဖြေပေးမည်။ ထိုနေ့ သောင်္ကြာနေ့ညတွင်အိမ်ပြန်ကြပြီး ကလေး၏ အခြေအနေကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ထိုအရာအမှန်အကန်မဖြစ်ဖို့ရန်အစာရှောင်ဆုတောင်းခဲ့သည်။ ထိုနေ့ညတွင် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်၏အိပ်မက်ရူပါရုံထဲသို့လာပြီး စကားပြောခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းအရာမှန်ကန်သည် မမှန် ကန်သည်ကို သိလိုလျှင် ကျွန်ုပ်အမျိုးသမီးကိုမေးလိုက်ပါ။ ဘုရားသခင်က အိပ်မက်ရူပါရုံထဲတွင် “ရောဘတ်၊ သင့်မိန်းမကအမြွာပူးမွေးမှာ၊ သို့ဖြစ်၍ ဆရာဝန်က ခွဲခြားမရဖြစ်နေသည်” ဟုဆို ထားသည်။ နောက်မနက် အိပ်ယာမှနိူးထသောအခါ Ileana	အား “အဘယ်အရာမျှစိုးရိမ်ခြင်းမရှိ နှင့်၊ သင်သည်အမြွာပူးမွေးလိမ့်မည်” လို့ပြောခဲ့သည်။ တနင်္လာနေ့ပြန်သွားသောအခါ ဆရာဝန် ကနောက်တစ်ခါထိုင်စေပြန်သောအခါ ကျွန်ုပ်က “ ကျွန်ုပ်တို့ထိုင်စရာမလိုတော့ပါ၊ ဘုရားသခင် ကအမြွာပူးလေးပေးမည်” ဟုဆိုထားသည်။ သူက “ နင်ဘယ်လိုသိသလဲ” မေးသည်တွင် “ဘုရားသခင်က သောင်္ကြာနေ့ညတွင် အိပ်မက်ရူပါရုံပေးခဲ့ကြောင်း” ပြောပြခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဆုတောင်းခြင်း၏အဖြေအနေဖြင့် ဘုရားသခင်သည် သန်သန်မာမာပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဤယောင်္ကျား အမြွာပူးနှစ်ယောက်ကိုပေးတော်မူခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးတစ်ခုရှိသေးသည်။ အများကြီးပြောပြစရာရှိသော်လည်း အခုပဲအချိန်ရှိတယ်။ ဤသည်မှာ အရှေ့ပိုင်းတွင် သမ္မာကျမ်းစာကွန်ဖရင့်ကြီး၏နောက်ဆုံးညပင်ဖြစ်သည်။ အသင်း တော်ကိုဝင်ရောက်စေပြီး ထိုအရပ်တွင် နာမည်ကျော်ဆရာတော်တော်များများရှိသည်။ သင်းအုပ် က နောက်ဆုံးညတွင် တရားဟောရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ပြင်ဆင်ထားသည့်အရာများမှာ ဧဝံဂေလိဆိုင်ရာတရားဒေသနာများသာဖြစ်သည်။ ထိုနံနက်တွင် ထိုအသင်းတော်ဝင်လူငယ်တစ် ဦးအားမည်သည့်အကြောင်းအရာဟောသင့်သည့်အကြောင်း သူ့အထင်ကိုမေးမြန်ခဲ့သည်။ သူက “ ဘာပဲဟောဟော ဧဝံဂေလိတရားတော့မဟောပါနဲ့၊ သင်းအုပ်က တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းထိုတရားကို ဟောသောကြောင့် ယနေ့ညလာမည့်သူများသည် ပြောင်းလဲပြီးသူများဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ဘာပဲဟောဟော ကယ်တင်ခြင်းတရားဒေသနာကို ဒီညမဟောပါနဲ့” ဟုဆိုသည်။
ကျွန်ုပ်သည် တည်းခိုခန်းသို့ပြန်လာပြီး တစ်ယောက်တည်းနေရန်အတွက် ကလေးများ ကို တစ်နေနေရာသို့ခေါ်ဆောင်သွားရန် Ileana ကိုပြောခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၌ပါသော တရားဟော ချက်များသည် ရိုးစင်းသော ဧဝံဂေလိတရားဒေသနာများသာဖြစ်သည်။ ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် လမ်း လျှောက်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ချွေးများတဖြိုက်ဖြိုက်ကျလာသည်။ မာနတ်က နာမည်ကျော်တရား ဟောဆရာများ၏ရှေ့တွင် မိမိကိုယ်ကို အရူးဖြစ်စေကြောင်းဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ကြမ်းပြင်ပေါ် တွင်လမ်းလျှောက်ပြန်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် အစာရှောင်ဆုတောင်းသည်ဟူသည်မှာ ပြောစရာ တောင်မလိုပေ။ အခြားတရားဟောချက်ကိုပြင်ဆင်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းမရနိူင်ပေ။ ယင်းမှာ ကျွန်ုပ်သည် ရိုးစင်းသောဧဝံဂေလိတရားဒေသနာသာဟောသင့်သည် ဟူသောသဘောပင်ဖြစ် သည်။ သို့သောကြောင့် လူနှစ်ယောက် သို့မဟုတ် သုံးယောက်လောက် “ရှေ့သို့”လာရန်ဘုရား သခင်ထံဆုတောင်းခဲ့သည်။ “ကိုယ်တော်၊ ထိုတရားဟောဆရာကြီးများရှေ့တွင် အရှက်တကွဲ အကျိုးနည်းမဖြစ်စေပါနှင့်” ဟုဘုရားသခင်အားပြောဆိုဆုတောင်းခဲ့သည်။ ထိုအခါ ဘုရားသခင် က “သူတို့အတွက် တရားဟောမှာလား၊ ငါ့အတွက်တရားဟောမှာလား” ဟူ၍စကားပြောဟန်ရှိ သည်။ ကျွန်ုပ်ကလည်း “သူတို့အတွက်မဟုတ်ဘဲ၊ ကိုယ်တော်႔အတွက် တရားဟောပါမည၊် ကျွန်ုပ်အတွက်မိုက်မဲစရာဖြစ်ရင်တောင် ကိုယ်တော်႔အတွက်သာဟောပါမည်” ဟုဆိုသည်။
ထိုအချိန်လောက်တွင် Ileana နှင့်ကလေးများပြန်လာခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရား ကျောင်းသို့ရောက်ရှိလာကြပြီဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်သည် စိုးရိမ်မှုများဖြင့်သာလုံးပမ်းနေရသည်။ တေးသီ ချင်းများကို သီဆိုထားလျက် ကျွန်ုပ်သည် တုန်လှုပ်ပြီးချွေးများစီးကျနေသည်။ သင်းအုပ်ဆရာက ကျွန်ုပ်ကို မိတ်ဆက်သည်တွင် ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်အသင်းတော်၍ကဲ့သို့ငြိမ်သက်လျက်ရှိလာ သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ထိုတရားဒေသနာကို ရှိသမျှအားဖြင့်ဟောပြောခဲ့သည်။
ထိုနေ့ညတွင်သင်းအုပ်ဆရာဖြစ်ရန်ကြိုးစားလျက်နဲ့ပျောက်ဆုံးနေသောသင်းအုပ်၏သား နှင့်အသင်းတော်ဘုရားကျောင်းရှေ့တွင် ဒူးထောက်ပြီး မိမိလက်ဖြင့် တွားသွားကာ “ကျွန်ုပ် ပျောက်နေသည်၊ ကျွန်ုပ်ပျောက်နေသည်၊ ကျွန်ုပ်ပျောက်နေသည်” ဟု အော်ဟစ်နေသောလူအ ပါအဝင် လူပေါင်း ၇၅ ဦးခန့်သည် ထိုည၌ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံရန်ရှေ့သို့လာခဲ့ကြသည်။ ကောင်မလေးသုံးယောက်သည် ထ၍ဆုတောင်းကြသည်။ ထိုသူတို့သည် မျက်ရည်မျက်ခွက်ဖြင့် အပြစ်များကို ဝန်ခံကြပါသည်။ ထိုသူတို့သည်လည်းပျောက်ဆုံးနေသောသူများပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးသည် ၁၁နာရီတိုင်အောင်ဖြစ်သော်လည်း မည်သူမျှလှုပ်ရှားခြင်းမရှိပါ။ ဤသည် မှာ သာမန်သဘောတရာမဟုတ်သည်ကို သူတို့သိမြင်ကြသည်။ Dr. Ian Paisley ၏သားက ကျွန်ုပ်မိန်းမနှင့်ကလေးများအား “ ဤသို့သောအဖြစ်အပျက်ကို ကျွန်ုပ်မမြင်ဘူးပါ”ဟုဆိုခဲ့သည်။ ထိုသူသည် ကမ္ဘာ့နာမည်ကြီးတရားဟောဆရာ၏သားဖြစ်သည်။ ထိုအသင်းတော်တွင် နိူးထမှု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ လူပေါင်း ၅၀၀ ကျော်သည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကျပြီး နောက်တွင် ဘုရားကျောင်းသို့လာခဲ့ကြသည်။
မာနတ်သည် “ဘာပဲဟောဟော၊ ဧဝံဂေလိတရားမဟောပါနှင့်”ဟုဆိုသောကောင်လေး အားဖြင့် စကားပြောခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်သည် အစာရှောင်ပြီး တရားဒေသနာအတွက်ဆု တောင်းထားသည်ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်၏ဆုတောင်းခြင်းကိုနားညောင်းသည့်သဘောဖြင့် ထိုညတွင် နိူးထမှုကြီးကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်သာမက စာတန်ကိုလည်းအုပ်စိုးကြောင်းသက်သေပြတော်မူသည်။
ချစ်သောမိတ်ဆွေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နိူးထမှုရရှိနိူင်သည်ဟူသည်မှာ ဖြစ်နိူင်ပေသည်။ ဘုရားသခင်သည် နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်တို့မလုပ်ဆောင်နိူင်သောအမှုအရာကိုတစ်မိနစ်အတွင်း လုပ်ဆောင်နိူင်သည်။ တရားဒေသနာစာရွက်ကို အိမ်သို့ယူဆောင်သွားပါ။ နောက်တစ်ပတ်တွင် အကြိမ်ပေါင်းများစွာဖတ်ရှုပါ။ သင်၏ယုံကြည်ခြင်းကို တိုးပွါးလာစေလိမ့်မည်။ နောက်တစ်ပတ် ကျွန်ုပ်တို့၏အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းတွင်လည်းပါဝင်ပါ။ နိူးထမှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အထဲတွင် ဆင်းသက်လာပြီး ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းသောနာမကို ချီးမြှောက်ရန်အတွက် ဘုရားသခင်ကို အစာရှောင်ဆုတောင်းပါ။
ယေရှုသည် သင်၏အပြစ်ကြွေးကိုပေးဆပ်ရန် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံတော်မူခဲ့ သည်။ သင်၏အပြစ်များအားလုံးကို ဆေးကြောသန့်စင်စေရန် အသွေးတော်ကိုသွန်းလောင်းခဲ့ သည်။ သင့်အားအသက်ကိုပေးရန် ခန္ဒာကိုယ်ဖြင့် သေခြင်းမှ ထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။ ယေရှုကို ယုံကြည်လက်ခံလျှင် ယခုဘ၀နှင့် ထာဝရကာလပတ်လုံးကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။ အာမင်…..။
တရားဒေသနာမတိုင်မှီကျမ်းစာဖတ်ခြင်းကို Mr. Prudhomme ကဆောင်ရွက်သည်။ မဿဲ ၉း ၁၀- ၁၅
တရာဒေသနာမတိုင်မှီ Mr. Benjamin Kincaid Griffith က “ဤသို့ဆုတောင်းပါသလား” တေးသီချင်းဖြင့်ချီးမွမ်းသည်။ (တေးရေး-Rev. William C. Poole, ၁၈၇၅-၁၉၄၉ )